(1) Japanese teachers and course instructors are invited toatalk on 14th March 2018 at MAJA Center regarding monthly Japanese language teaching. For more details, click on HOT NEWS tab of the page. (2) Announcement of an interview for 30th Asian Pacific Children’s Convention in FUKUOKA (APCC) 2018. For detail information, click on HOT NEWS tab of the page.
လစဉ်ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည့် ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအစီစဉ်အတိုင်း ဆွေးနွေး ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားလျက်ရှိသည့် ဆရာ၊ ဆရာမ များတက်ရောက်ကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးပို့ချမည့် သူ - Mr. Naoki SATO
テーマ -　「日本語の文法」
(ဆရာ Mr. SATO　ကို Japan Foundation မှမြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ထားရာ ယခုလက်ရှိ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(YUFL)တွင် ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။)
時間 - 10:00 - 12:00
日日 - 14.3.2018 (ဗုဒ္ဓဟူး)
場所 - MAJA CENTRE
အခန်းအမှတ် - G 21, G-22,2လွှာ၊ တိုက် ( C)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်း။
လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် တက်ရောက်မည့် ဆရာ/ဆရာမများအောက်ပါဖုန်းနံပါတ်၊ email သို့ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
09 428612151,09 262602121
မှတ်ချက် ။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မရှိပါ။
30th Asian-Pacific Children's Convention In FUKUOKA (APCC)2018
Interview ဖြေဆိုရမည့်ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း။
နေ့ရက် - 18.2.2018( Sunday )
အချိန် - 9:30 AM (9:00 အရောက်လာရန်)
နေရာ - MAJA Office (7th Floor)
Room 707, 7thFloor ,Bldg C ,Pearl Condo , Kabaraye Pagoda Rd, Bahan Tsp.
Ph – 09 428612151, 09 262602121
1. May Myat Noe Khine U Thant Sin
2. Thet Hnin Su San U Kyaw Kyaw Myo
3. Eant Kaung Paing U Khin Maung Win
4. Soe Thway Ko U Soe Min
5. Khant Eain Si U Zaw Bo Khant
6. Nant Jano Thin Khaing U Myo Khaing
7. Aleinmar Kyaw U Kyaw Thein Htut
8. Kyawt Shin Thaw Tar U Phyoe Thaw Tar
9. Nyi Hein Zaw U San Tint Naing
10. Chan Myae Phyo U Mg Nu
11. Min Khant U Shwe
12. May Myat Than Sin U Aung Ko Ko
13. Saw Kaung Khant Thiha U Thiha
14. Aye Chan Moe Dr. Sein Lin
15. Naung Oo Hlaing U Ye Naung
16. Eaint Hnaing Htet Oo U Win Naing
17. Aung Zay Ya Tu U Aung Kyaw San
18. Ye Myint Myat U Win Myint
အချိန် - 1:00 PM (12:45 အရောက်လာရန်)
1. Swan Htet Nay Khaing U Nay Myo Oo
2. May Myat Noe U Htay Aung
3. Khaing Thar Phyoe Phyoe U Min Zaw
4. Nway Ei Ei Hlaing U Pe Kyi
5. May Thu Khaing U Win Shwe
6. Aye Chan Myaing U Myo Khine
7. Kaung Myat San U Ye Lwin Oo
8. Htet Oo Khin U Aung Than Oo
9. Eaint Po Po Tun U Tun Lin
10. Pyae Phoo Khaing U Than Zaw Htwe
11. Su Than Sin U Tun Myint Aung
12. Lay Pyay Thway U Soe Nyein Tun
13. May Thu Khaing U Kyaw Thura Aun
14. Hmue That Paing Ko U Aung Ko Lat
15. Moe Myint Myat Thu Win U Myat Thu Win
16. Hnin Oo Khin U Soe Min Zaw
17. Naug Kha Kha Mudra U Khun Mg Noe
မှတ်ချက်။ ။ လျှောက်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင် အချက်အလက်မပြည့်စုံသူများ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို အင်တာဗျူးရက် နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်တင်ပေးပါရန်။